‘Sigqemeke engeqiwa ntwala ngokudlula kuka Dr Bishop Mzimela’- Zikalala – Sivubela intuthuko Newspaper
‘Sigqemeke engeqiwa ntwala ngokudlula kuka Dr Bishop Mzimela’- Zikalala
UMnuz. Sihle Zikalala
USihle Zikalala ongu Ndunankulu waKwa Zulu-Natali udlulise amazwi okuqinisa idolo umndeni kanye nebandla ngokudlula emhlabeni kuka Dr Bishop Zwelakhe Mzimela(72) owasungula i KwaMashi Christian Centre.
UZikalala uchaze u Mzimela njengomholi olwe kwaze kwaba sekupheleni elwela inkululeko yesizwe sakhe ngokuzinikela.
“Umbhishobhi uMzimela ubeqinile okholweni futhi enegalelo elikhulu kwezombusazwe. Uqhamuka emndenini obambe iqhaza elikhulu ekulweni nohulumeni wengcindezelo. Noma izwe lethu selithola intando yeningi ngo 1994, uqhubekile nokulwela amalungelo abantu,” kusho u Zikalala.
UNdunankulu uchaze u Bishop Mzimela njengensika yomphakathi ebeyinogqozu lokushiya igama elihle, ikakhulukazi ezimpilweni zabantu abahlwempu.
“Egameni lobuholi buka Hulumeni wesifundazwe kanye nabo bonke abantu baKwa Zulu-Natali, sithanda ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwa Mzimela kanye nsasebandleni. U Bishop Mzimela usikhulise ngobuhlakani nokusihola ngokomoya, engathi umoya wakhe ungathola ukuphumula,” kuphetha u Zikalala.